आफ्नो मृ’त्यु हुने समय पहिल्यै थाहा पाएपछि यी युवतीले गरिन यस्तो त’यारी, जुन सुन्दा सबै च’कित भए ! – Daily NpNews
मुख्य पृष्ठ /रोचक/आफ्नो मृ’त्यु हुने समय पहिल्यै थाहा पाएपछि यी युवतीले गरिन यस्तो त’यारी, जुन सुन्दा सबै च’कित भए !
आफ्नो मृ’त्यु हुने समय पहिल्यै थाहा पाएपछि यी युवतीले गरिन यस्तो त’यारी, जुन सुन्दा सबै च’कित भए !
एजेन्सी । आफ्नो मृ’त्युको बारेमा कसैलाई पनि पूर्व-ज्ञान वा सं’केत हुदैन । मृ’त्यु कहिले, कहाँ, कसरी हुन्छ ? यो कसैलाई पनि थाहा हुँदैन। भनिन्छ, पु’राना जमानामा जो मानिस धेरै ध्या’न गर्थे, उनीहरुले मात्र आफ्नो मृ’त्युका विषयमा जानकारी पाउँथे।
हालै फिलिपिन्समा यस्तो विषय सा’र्वजनिक भएको छ, जसले सबैलाई च’कित तु’ल्याएको छ। फिलिपिन्सकी एक मोडल तथा विद्यार्थी राचीन परंगुटालाई आफ्नो मृ’त्युका वि’षयमा जानकारी भयो। आफ्नो मु’त्यु हुने दिन थाहा पाएकी उनले त्यसको सम्पूर्ण त’यारी गरेकी थिइन्।****** यो समाचार को पुरा भिडियो हेर्न यहाँ तल क्लिक गर्नुहोला ******
अन्तर्राष्ट्रिय संचारमाध्यमकाअनुसार २० वर्षीया राचीन निकै सुन्दर छिन्। उनले आफ्नो करियर भर्खर मात्रै सुरु गरेकी थिइन्। त्यतिबेला उनलाई थाहा भयो की आफू आस्टिओसार्कोमा नामक क्या’न्सरबाट पी’डित भएको जानकारी भयो। सो वि’रामीले पीडितको शरीरको हड्डीमा अ’सर गर्छ।
उनलाई थाहा थियो की, आफूसँग धेरै स’मय छैन। तर उनले आफ्नो मृ’त्यु पहिला केही इच्छा पू’रा गर्नु थियो। उनको अ’न्तिम इ’च्छा थियो आफ्नो दा’ह सं’स्कार गर्ने बेलामा आफू निकै सुन्दरी देखिनु।
राचीन चाहन्थिन् आफ्नो मृ’त्युपछि मृ’त शरीरमा सेतो टप र कपालमा फूलको हार होस्। आफ्नो यही इ’च्छालाई उनले आफन्तसँग शेयर गरिन्। जब वि’रामीसँग ल’ड्दै गर्दा उनको मृ’त्यु भयो, उनका आफन्तले उनको अ’न्तिम इ’च्छा पूरा गरे।
उनको चि’ताको फोटो सामाजिक सं’जालमा निकै शेयर भएको छ। राचीन मृ’त्युप’छि चि’तामा निकै सु’न्दर देखिएकी थिइन्। यसबाहेक राचीनको अर्को एउटा इ’च्छा पनि थियो। उनी चाहन्थिन आफ्नो मृ’त शरीर आफ्ना बु’वाको चि’हान न’जिकै होस्।
तर, ठाउँ न’भएका कारण उनको वु’बाको चि’हान’माथि उ’नको चि’हान बनाइएको छ। यति छोटो उमेरमा सं’सार छो’डेकी राचीनले दुनियाका सामु मृ’त्यु’लाई हाँसी हासी स्वी’कार गरेकी छन्।****** यो समाचार को पुरा भिडियो हेर्न यहाँ तल क्लिक गर्नुहोला ******